Global Voices teny Malagasy » Hafatra An-Dahatsoratra Ve No Nitarika Ny Fisamborana Ilay Gadra Iraniana-Amerikana Navotsotra Vao Haingana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Janoary 2016 13:18 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Mpiambina mijery ao amin'ny efitranon'ny fonja ao Iran. Saripikan'i Babak Farrokhi ao amin'ny Flickr. (CC BY 2.0)
Nivoaka tao amin'ny tati-baovao mahaleotena IranWire  ny antsipirihan'ny fisamborana ilay Iraniana-Amerikana Nosratollah Khosravi-Roodsari, ny olona fahaefatra navotsotra tamin'ny fifanakalozana gadra tamin'ny 18 janoary  eo amin'i Iran sy i Etazonia.
Ny gadra, izay tsy dia fantatra loatra raha oharina amin'i Jason Rezaian mpanao gazetin'i Washington Post, Amir Hekmati miaramilan'ny tafika an-habakabak'i Etazonia taloha ary ny pastora Saeed Abedini, dia heverina ho nosamborina noho ny fanaraha-maso ny daholobe  ataon'ny manampahefana Iraniana amin'ny SMS.
Efa nifanaovana talohan'ny fanesorana ny fanasaziana ara-toekarena an'i Iran naharitra taona maro, tafiditra anatin'ilay fifanarahana ara-nokleary manantantara  [mg] tamin'ny 18 janoary teo amin'i Iran sy i Etazonia, tamin'ny volana jolay tamin'ny herintaona ny fifanakalozana gadra teo amin'ny roa tonta.
Nitatitra ny IranWire fa i Khosravi-Roodsari, izay teraka tany Iran saingy nifindramonina tany Etazonia tany amin'ny fanombohan'ny taompolo 1980s tany dia niasa ho fanka-kevitra mahaleotena ho an'ny Federal Bureau of Investigation (FBI) an'i Etazonia tamin'ny 2013. Taoriana kelin'izany dia niverina tany Iran izy hitsidika ny reniny, izay mbola nijanona tany ary nampianatra teny anglisy.
Tamin'ny alalan'ny antsafa nifanaovana tamin'ny fianakavian'i Khosravi-Roodsari sy ireo niray efitrano taminy tao am-ponja no nanazavan'ny IranWire :
One night, at a gathering with friends, Khosravi saw a report on BBC Persian television about Robert Levinson, a CIA consultant and former FBI agent who disappeared in Iran in 2007. Khosravi sent a text message to an FBI contact indicating that he knew Levinson’s whereabouts. Later, during interrogations and in conversations with cellmates, Khosravi said that he sent the message under the influence of alcohol, which is illegal in Iran. His cellmate and family members say that Khosravi had no information about Levinson’s fate, and had simply lied to impress his FBI contact. The Iranian government has denied any knowledge of Robert Levinson’s disappearance, a claim that appears to be accepted by the White House.[..]
Indray alina, nandritra ny fihaonany tamin'ny namana, nahita tatitra tamin'ny fahitalavitra BBC teny persa niresaka momba an'i Robert Levinson, fakankevitry ny CIA sady mpiasan'ny FBI taloha nanjavona tany Iran tamin'ny 2007 i Khosravi. Nandefa hafatra lahatsoratra tamin'ny mpifandray aminy tao amin'ny FBI ity farany nanondro fa fantany ny mombamomba an'i Levinson. Taty aoriana, nandritra ny famotorana sy ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpiray efitrano am-ponja, dia nilaza i Khosravi fa nandefa ny hafatra noho ny herin'ny alikaola izy ary tsy mahalala na inona na inona amin'izay mahazo an'i Levinson, ary nandainga fotsiny izay izy mba hanindriana ilay mpifandray aminy ao amin'ny FBI. Nitsipaka ny fahalalàna izay fanjavonan'i Levinson ny governemanta iraniana, fanambarana izay noheverina ho neken'ny ao amin'ny Trano Fotsy.[..]
Na dia eo aza ny fitsipahan'ny governemanta ny fahalalàna ny mombamomba an'i Levinson, dia heverina ho manaikitra ny manampahefana ny raharaha mikasika azy. Voatatitra ho teny fototra anaovan'ny sampam-pitsikilovana iraniana fanaraha-maso ny “Robert” sy ny “Levinson”. Ireo mpanao raharaha finday rehetra ao Iran dia na sampana miaraka na an'ny governemanta iraniana avokoa. Araka ny lazain'ny manampahaizana manokana momba ny fiarovana, dia manangona sy manara-maso hafatra lahatsoratra an-tapitrisany isan'andro ny sampam-pitsikilovana iraniana, izay mitovy amin'ny NSA. Mihevitra ny fianakavian'i Khosravi sy ireo mpiray efitrano am-ponja taminy fa narahi-maso i Khosravi nanomboka tamin'ny nandefasany hafatra momba an'i Levinson tamin'ny mpifandray taminy tao amin'ny FBI.
Nolazain'ny mpisolovavan'i Khosravi tamin'ny IranWire fa voampangan'ny manamboninahitry ny fitsikilovana ho nanao asam-pitsikilovana izy ary nandefa “fampahafantarana tsiambaratelo” tany amin'ny “governemanta tsy tia”.
Mampiasa paika isan-karazany amin'ny fanangonana tahirin-kevitry ny governemanta i Iran, na amin'ny DPI (teboka isan-dokon'ny sary sy lahatsary) na amin'izay tendrena ao amin'ny telefonina, hanangonana izay tahirin-kevtra rehetra tsy voaafina amin'ny alalan'ny Orinasam-Pifandraisandavitr'i Iran (TCI), misahana ny fifandraisana amin'ny telefonina raikitra sy finday sady mpanao raharahan'aterineto lehibe indrindra ao Iran amin'ny alalan'ny Orinasam-pandefasana tahirinkevitra ao Iran (DCI). Amin'ny ankapobeny, ny fivezivezen'ny hafatra rehetra tsy voaafina amin'ny aterineto sy ny telefonina dia azon'ny governemanta jerena avokoa.
Tranga iray hafa azo marihana amin'ny fanangonana tahirinkevitra mitarika mankany amin'ny fisamborana ny raharaha Isa Saharkhiz tamin'ny 2009 , izay niafina tamin'ny manampahefana noho ny fandraisany anjara tamin'ny Hetsika Maitso.
Na ny lalampanorenana na ny lalàna ady heloka bevava ao Iran dia samy manandratra ny zon'ny olompirenena manoloana ny fanaraha-maso tsy ara-dalàna. Jereo ny Andininy faha-25  amin'ny Lalampanorenana sy ny Andininy faha-104  amin'ny fehezan-dalàna ady heloka bevava ao Iran.
Ity raharaha ity no manasongadina ny fepetra marefo mihatra amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fivezivezen'ny vaovao ao Iran ary ny filàna fiarovana ara-pitandremana eo amin'ny mpiserasera an'aterineto Iraniana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/29/78823/
 fifanakalozana gadra tamin'ny 18 janoary: https://globalvoices.org/2016/01/17/implementation-day-in-iran-nuclear-diplomacy-leading-to-prisoner-releases-and-sanctions-relief/
 fanaraha-maso ny daholobe: https://advox.globalvoices.org/2014/02/11/iran-on-the-day-to-end-mass-surveillance/
 fifanarahana ara-nokleary manantantara: https://mg.globalvoices.org/2015/07/14/71956/
 Isa Saharkhiz tamin'ny 2009: https://www.eff.org/deeplinks/2010/10/saharkhiz-v-nokia
 Andininy faha-25: http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3017-the-constitution-of-the-islamic-republic-of-iran.html?p=7
 Andininy faha-104: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000026-english-translation-of-the-islamic-republic-of-irans-criminal-code-of-procedure-for-public-and-revolutionary-courts.html